Indlela okukhulelwa intombazane ngaphansi kwetafula? Lapho kungenzeka okukhulelwa intombazane: amathiphu
Ukuzalwa ingane kuyisikhathi eside elindelwe oyifunayo - zenjabulo enkulu ngoba wonke umndeni. Futhi uma lokhu ingane wokuthoma emndenini ke lokho ayikho ubulili, isimiso, akukho mahluko. Nokho, imibhangqwana eminingi nezingane elilodwa noma amabili, bafuna ingane elilandelayo of a sex ethile. Futhi akukho lutho olungalungile. Kungcono ukuba sizibuze ukuthini ukuthi lokhu kungenziwa, futhi okukhulelwa ingane wobulili, lokho singathanda kule pair. Umuntu othile ufuna ngempela indodana, umuntu nesithakazelo lapho kuzalwa indodakazi yakhe. Zikhona ongakhetha eziningi izinhlelo ukubala, izinqubo, amakhalenda kanye namatafula lokukhulelwa ingane. Kulesi sihloko sizoxoxa ngendlela okukhulelwa intombazane ngaphansi kwetafula. Amathebula we bambalwa kakhulu. Kukhona-Chinese, itafula nge-ovulation Japanese. Nokho, kufanele kuqondwe ukuthi akukho neyodwa kulezi zinkolo izindlela akayinekezi 100% isiqinisekiso sokuthi ozozalwa uyintombazane. Kodwa namanje amathuba ukuze uthole umphumela oyifunayo.
Njengoba okukhulelwa intombazane etafuleni
Kunezindlela eziningi izindlela kusungulwe abantu abavamile, kodwa kungakhathaliseki ukuthi eyiqiniso - alaziwa. Kukhona amatafula amathathu esiyinhloko nje ebamba isisu. Leli shadi nge-ovulation, kanye Japanese Chinese. Ukuze siphendule umbuzo kanjani okukhulelwa intombazane etafuleni, kudingeka unqume ukuthi uyini umehluko phakathi kwawo onjani resort.
Le ndlela singamethemba futhi kuzosiza ukuphendula umbuzo kanjani okukhulelwa intombazane. ishadi nge-ovulation ukusiza ukuthola lapho owesifazane eza lesi simanga. Lo mbono kusekelwe namaqiniso esayensi. Wonke umuntu uyazi ukuthi akhulelwe ingane yowesifazane kumele ovulating. Ngaphandle kwale khona uzokhulelwa eyodwa. Nokho, ukuba akhulelwe intombazane akwanele nje ukuze uthole kuze kube yilolu suku. Kunalokho, kudingeka ocansini izinsuku ezimbalwa ngaphambi ukukhiqizwa kwamaqanda. Lokhu kungenxa yokuthi isidoda besilisa zihlukaniswe-X chromosome, okuyinto nje obangela ukuzalwa kwengane zesifazane, futhi Y-chromosome, okuyizinto ngokulandelana obangela ukuzalwa umfana. Ngakho, Y-chromosomes ukuhambisa emgomweni yayo isheshe ngakhoke zalisa iqanda ngaphambili. Nokho, bahlala cishe usuku, ngenkathi X chromosome unekhono ukuphila Enkathini ecishe ibe 3 izinsuku, kodwa usinde ukuhambisa kancane. Kuyona inikele konke lokhu, singaphetha ngokuthi, lapho uma ubulili ngesikhathi nge-ovulation ngokwayo, kungenzeka ukuba umfana. Ukuze uthole intombazane, odinga ukukwazi uma ovulate, futhi uzama ukuba akhulelwe ingane izinsuku 3 ngaphambi kokuthi, kusukela ngaleso sikhathi zonke Y chromosome uyofa futhi kuyoba khona kuphela X chromosome. Kulokhu, amathuba okuthola ukukhulelwa intombazane enkulu. Ukuze kuqinisekiswe ukuthi zonke wahamba njengoba kahle ngangokunokwenzeka, kubalulekile ukuba ube yilungu ikhalenda nge-ovulation bese udala elakho ithebhula. Yiqiniso, lokhu kuzothatha izinyanga ezimbalwa, kodwa umphumela oyifunayo kungcono ukulinda.
Indlela ukuthola lapho nge-ovulation?
Indlela engcono ukubala nge-ovulation kuyinto nesilinganiso lokushisa lomzimba basal. Kuyadingeka ukukala phezu imijikelezo eziningana ke ukuze udale ishadi ubone uma kwenzekani inqubo. Udinga ukukala izinga lokushisa kwe-thermometer ezejwayelekile ingemuva. Lokhu kumele kwenziwe nsuku zonke, ngaphandle kokukhetha, ngesikhathi sinye siyafanana, qiniseka ngokushesha ngemva ovukayo (ngaphambi ukuthi akudingeki ukuba avuke embhedeni). Kungcono ukuqala le uphenyo kusukela ekuqaleni lomjikelezo, ngakho-ke, ngosuku lokuqala esikhathini. Umjikelezo ihlukaniswe izigaba ezimbili: ngaphambi nangemva ukukhiqizwa kwamaqanda. lokushisa izinkomba kuzosiza ukuqonda, lapho kwaba yi-ovulation.
Esigabeni sokuqala izinga lokushisa kufanele kube ngaphansi kweyesibili. I eduze "usuku X", the more it uzokwehla ke ngeke asukume (lokhu nge-ovulation), khona-ke izinga lokushisa ngeke ukhuphukele Ngaphakathi mo of khulelwa akufanele iwe. Ukuze ukwazi uma kungenzeka okukhulelwa intombazane, etafuleni kumelwe kwenziwe ngendlela efanele.
Le ndlela iye yathuthukiswa yi ososayensi Japanese. Ukuze ufunde indlela okukhulelwa intombazane, itafula 2014 nakho okuye elaliklanywe kubo. Ukuze siphendule lo mbuzo udinga kuphela ukwazi ngenyanga lokuzalwa kukayise esizayo nonina.
Ithebula ilula kakhulu futhi ecacile, kukholamu "Usuku lomama lokuzalwa" khetha ngenyanga yakho, okufanayo kusebenza amakholomu uPapa. Ezimpambanweni zomgwaqo ilandelana ikholomu uyisihluthulelo ofuna ukuzikhumbula, futhi etafuleni yesibili ukuthola wakhe. Lapho ungabona i-okuyinto nyanga ematfuba lokukhulelwa ingane ubulili ethile. Ngakho-ke, umbuzo kanjani okukhulelwa intombazane ngaphansi kwetafula, ithuthukiswe Japan, akufanele. Zonke ecacile.
ngenyanga nje ebamba isisu
Ubudala kanina Januwari. Indlovulenkhulu Mashi Apreli. May Juni Julayi Agasti. Sep. Oct. Nov. Disemba.
27 d m d d d d m m m m m m
28 m d m d d d m m m d d d
29 d m d m m m d d d m d m
30 m d d d d d d d d m d d
31 m d m d d d d d d m m m
33 d m d d d d d m d d d m
34 d d m d d d d d d d d m
36 d m m d m d d d m d m m
37 m d m m d m d m d m m m
38 d m d m m d m d m m d m
39 m d m m m m d m d d m d
40 d m d m d m m d m d d d
Enye impendulo yombuzo othi kanjani okukhulelwa intombazane - etafuleni Chinese esisiza abantu ukuba sifinyelele elamukelekile izinkulungwane zeminyaka. Lena ngenye yezindlela endala yokunquma ucansi ingane. Abadali le ndlela kuthiwa ukunemba kwayo kuyinto 98%. Thola wobulili wengane kungaba kakade ngesikhathi sokukhulelwa eyalandela noma ukuhlela kusengaphambili. AmaShayina bakholelwa ukuthi ubulili umntwana kuncike ngokuphelele kuphela elivela kumama, futhi izibalo abazenzi ikhumbula kuphela ubudala girl inyanga nje ebamba isisu. Nokho, ukubala yobudala amantombazane kangaka kule ndlela lihlukile evamile. Lapho sengineminyaka engu-langempela kuyadingeka ukuze ungeze omunye unyaka, lapho eneminyaka engu-China alufani kubhekwa kusukela ngosuku lokuzalwa, futhi kusukela osukwini lapho umuntu wayezelwe. Futhi ingane isanda kuzalwa ezweni, sesivele engu-izinyanga 10. Lokhu kubaluleke kakhulu, ngakho kufanele ucabangele ngokucophelela iminyaka yakho, ngaphandle kwalokho imiphumela ngeke olunembile. Enye eziningi iphuzu elibalulekile - ekuqaleni kwenyanga yokuqala konyaka. It iyahlukahluka kuye ngosuku we Chinese New Year. Minyaka yonke, lolu suku lihlukile. Ngo-2013, kwaba Februwari 10, 2014 - Januwari 31, futhi ngo-2015 izoba ngoFebhuwari 19. Ithebula linekholomu 2: evundla mpo. Esikhathini ovundlile izinombolo ebonisa inyanga ikhalenda Chinese, futhi mpo - mantfombatane lapho nje ebamba isisu. Futhi empambana letindlela tekuphila - iseli ngemibala elisho ubulili umntwana. Le ndlela futhi silula, uma ubheka ikhalenda kanye nobudala. Ngakho, ungabona nini futhi kanjani okukhulelwa intombazane. Ithebula, ukubuyekezwa zazo ezinokwethenjelwa, zingaba wusizo kakhulu.
Ezinye izindlela kokubala phansi
Ngaphezu kwalezi amatafula, zikhona izindlela eziningana namathuba ukucabanga kusengaphambili, lapho kungenzeka okukhulelwa intombazane.
It is wafakazela ukuthi igazi somuntu uyakuba ukubuyekezwa ngokugcwele ngesikhathi esithile. Amadoda nabesifazane we ezinkathini ezihlukahlukene zesikhathi. Ibe igazi ivuselelwa ngokuphelele njalo eminyakeni 4. Countdown kuthoma ngesikhathi sokuzalwa, kodwa uma ukuphila wahlinzwa noma ukuhlukumezeka, okuyinto ababehamba ukulahlekelwa emikhulu yegazi, kubalulekile ukubala phansi isikhashana. Abesifazane futhi ukukhathazeka, ngaphezu ukuhlinza kanye nokulimala, sokubeletha isisu futhi ephelezelwa ukopha, ngokulandelana, uma kwenzeka, udinga ukuze ubale kusukela ngaleso sikhathi asinikiwe. Kukholakala ukuthi izinsikazi igazi yokuthuthukisa ebanjwa njalo ngemva kweminyaka 3. Iphuzu kule umbono uwukuthi ukubala yimiphi igazi abazali abasebasha futhi uqina. Abanye abantu bakholelwa ukuthi uma egazini likamama abasebasha, intombazane, futhi uma ubaba - umfana.
Le ndlela Ubuye nabasekeli baso. Abanye abantu bakholelwa ukuthi lokuzalwa ehlangene izigaba ezinqunywa ngokuthwasa kwenyanga, ekukhulelweni - iyathinteka. Okukhulelwa intombazane kungenzeka uma inyanga siyodlula uhlamvu zesifazane. Lokhu kwenzeka cishe zonke izinsuku 2.5.
Kunoma ikuphi, kungakhathaliseki ukuthi iyiphi indlela oyikhethayo, ulindele 100% yi akudingekile, ukuze uma umfana lokuzalwa engakutholi ecasukile. Ukuzalwa kwengane - injabulo enkulu kunazo zonke futhi kuyisikhathi eside elindelwe kakhulu ekuphileni, ngakho ngubani ongathanda akazalwanga, indodakazi ithenda noma indodana enesibindi, okubaluleke kakhulu, ukuthi ingane enempilo.
Kuthiwani uma kukhona zazopha phakathi nenkathi yokukhulelwa?
Screening, amasonto angu-12 bekhulelwe: kokubusa okulotshiweyo
Clearblue - Nge-ovulation Test. Yokusetshenziswa, ngempela
Askorutin ngesikhathi sokukhulelwa: izingibe
Rapid ukulethwa: izimbangela nokuvinjelwa
Ukungabikho menses - amenorrhea
Imali Real: ngokubhala izihloko inthanethi imali
Tale "I Fox and the Wolf": ukuhlaziya inganekwane
Indlela umchilo iPhone kusukela Apple ID: awusizo
I-electron microscopy iyithuluzi le-nanotechnology
Indlebe ekheniwe (saury). Indlebe multivarka okusemathinini
Popular ukuqina imodeli wesilisa
Okungenakuhlanganiswa ne-imeyili: sithumela amafolda, ama-archives namanye amafayela
Ukuthambisa Proper futhi ukuvundiswa lamagilebhisi - isibambiso izitshalo luningi
Indlela yokutshala turnips endle: izici, ukugcinwa, betshala nezinhlobonhlobo